Chengetedza Izvi Zvichibatsira: Iyo Gumi Mitsva Mitemo yeCrisis Kukurukurirana | Martech Zone
Chengeta Izvi Zvichiratidzika: Iyo Gumi Mitsva Mitemo yeCrisis Kukurukurirana
Mugovera, Kubvumbi 11, 2015 Svondo, Kubvumbi 19, 2015 Douglas Karr
Sangano redu riri muIndiana uye apo masimba-ayo-ari mudunhu akapasa vhezheni yavo yeChitendero Rusununguko Rokudzoreredza Mutemo (RFRA), dambudziko rakatevera. Yakanga isiri dambudziko rehurumende chete. Sezvo zvakakanganisa chikamu chebhizinesi, yakava dambudziko kune isu tese tichiita bhizinesi mukati medunhu. Kunyanya apo vamwe vatungamiriri vebhizimusi kunze kwenyika vakatanga kutaura nekutyisidzira kurova nyika (zvinonakidza zvichipiwa kuti havana kumbobvira vatyisidzira nyika dzavanotengesa dzine mvumo yekusarura nekushaikwa kwerusununguko).
Vandinoshamwaridzana navo mudunhu vanondiudza kuti masimba-iwo-iwo akanyeverwa zvachose kuti anga achienda mudutu uye zvaive zvisina basa zvachose. Kunyangwe iwe uri we kana unopokana nemutemo hazvina basa. Dambudziko rakatevera - uye bhizinesi rega rega rakatsvaga kuyedza kukwira pamusoro pemamiriro ezvinhu. Yakanga iri (uye inoramba ichingova), zvakanyanya kurota.
Iyo RFRA yaive yekudyidzana kufambiswa neruzhinji saka yakashaya chero kutsvagurudzwa kune vateereri, uye haina kutaura nemabhizinesi kana vatengi vakaitwa.
Kupandukira kwakatevera kwemabhizimusi kwaive neruzha asi havana kutaura nenzira kwayo kuti yaive yakawanda yemabhizimusi eHoosier, kwete vashoma chete vakakanganiswa, vakaramba mutemo.
Mhedzisiro yacho ndeyekuti vese vane basa bato uye vanopikisa vese vaive nedambudziko paruoko rwavo. Bato rine mutoro raifanirwa kudzoka kumashure pasina sarudzo kana sarudzo. Vanopikisa vaifanira kuronga uye kuyedza kuvaka izwi rimwe chete iro rairatidza kuramba kwavo mutemo kumakambani ari kunze kwenyika.
Vezvenhau vakasvetukira pamukana wekukanda huni pamoto uye kunyatsoita kuti moto uende. Mabhizinesi senge edu akamanikidzwa kuburitsa zvirevo zvedu. (Isu hatina kukumbira, kana kutsigira, mutemo kunyangwe chitendero changu). Yakanga iri dutu rakakwana.
Zvichida mhinduro yakanakisa yakabva ku Indianapolis Hofisi yaMeya, uyo - nepo achichengetedza - aiburitsa zvine mutsindo izwi remabhizimusi mudunhu uye achizviisa zvine hungwaru munzvimbo yehutungamiriri pamusoro peyagavhuna. Kwaive kufamba kwakanaka uye kwaiita sekukunda imwe yedambudziko.
Kusanzwisisika kwedambudziko rese iri, mumaonero angu, kwaive kwekuti vaive maHoosiers chaiwo vairatidza kupikisa kwavo zvakanyanya… uyezve mabhizimusi ari kunze kwenzvimbo akatanga kutaura zvekuramba Indiana… uye ivo maHoosiers avo vakaratidza kushora kwavo. Ndarwadziwa mumabhizimusi ari kunze kweIndiana ayo akatsvaga kukuvadza isu vedu vakatora matanho uye vakamanikidza vatungamiriri vedu vematunhu kuti vachinje nekukurumidza.
Ndakabvunzurudzwa na Ray Steele nezve mamiriro ezvinhu paWIBC:
Dambudziko risingafadzi zvechokwadi. Tariro yangu ndeyekuti chidzidzo chehubris chakadzidza naGavhuna. Zviri kusahadzika kuti achazombopora, uye nechikonzero chakanaka.
The Agnes + Zuva dambudziko njere timu yakagadzirirwa infographic iyo inoratidza iyo yakakosha mirawo mitsva gumi yematambudziko ekutaurirana. Ndokumbirawo unzwe wakasununguka kuriprinta kuchikwata chako uye nekugovana netiweki yako.
Kuverenga imwe neimwe yemitemo pazasi, unogona kunyatsoona kuti zvinhu zvakatadza ku Indiana.
Tags: agnes zuvaapurobenioffdambudzikokutaurirana kwedambudzikodambudziko rekutongachaizvogreg bhoraindianamike penceprhukama hwevanhuray steelerfrasalesforcewibc
Iwo Maviri Matsva Ecommerce Metric Iwe Unofanirwa Kuve Unoteedzera
5 Matipi Ekutora Yako Bhizinesi Mabrochure Kumusoro Notch